Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Ny tantaran'ny Ciro Immobile Child Plus Plus no nanambara ny tantaram-piainany
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "immobile". Ny tantara nosoratan'i Ciro tsy misy tantaram-pahaterahana sy ny tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, mahafantatra ny fahaiza-manaony tsara ny rehetra fa samy manana ny heviny ny Bio Bio Ciro Immobile izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Nanomboka teo, teraka tao amin'ny 20 i Ciro Immobileth andron'ny Febroary 1990 ao Torre Annunziata, Italia. Teraka tany amin'i Antonio Immobile rainy izy ary tamin'ny reniny Mikela Immobile.
Niroborobo tany amin'ny tanàna niaviany (Torre Annunziata sary etsy ambany) izay eo am-pototry ny Mount Vesuvius, ny fialan-tsasatry ny tanora Immobile tamin'ny filalaovan'ny baolina dia nanome baiko ny ray aman-dreniny fa tokony hiahiahy momba ny fanatanterahana ny rafitra misy azy.
Ny fiahian'izy ireo dia tsy dia nisy firy natao tamin'ny volokano nirohotra Tendrombohitra Vésuvius izay namotika indroa ny tanànan'i Annunziata. Ny ankamaroan'izy ireo dia nifantoka tamin'ny fironan'ny Young Immobile mba hanova ny fiainany sy ny efitranony ho any amin'ny kianja filalaovam-baolina iray izay noraisiny sary vongana tsy misy dikany.
Ireo ankizy tsy manan-kialofana tsy ampy taona koa dia nahatonga ny ahiahiny mikasika ny fiarovana ny zandriny lahy, Luigi, izay matetika nokajiana handray ireo tifitra ireo, fampivoarana izay tsy manimba ny fahasalaman'ny ankizy ihany fa afaka mitarika azy ihany koa hanaraka ny làlan'ny fandringanana ny zokiny lahy.
Fotoana fohy talohan'ny nahalalan'ny ray aman-drenin'i Immobile fa ny fomba tsara indrindra hanavotana ny trano amin'ny devastà dia ny hanomezany ny fitiavan-janany ampy ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ao amin'ny sekolin'ny baolina kitra baolina kitra, Torre Annunziata '88 fony izy folo taona 5.
Immobile no nanao ny taona 5 manaraka tamin'ny fiainany tany Torre Annunziata '88 izay nanasongadinany ny fahaizany ny lalao baolina kitra amin'ny sehatr'asa mahomby. Ny fampisehoana mahatalanjona nataony dia nanampy azy hifindra any Sorrento Calcio (taorian'ny niadiany tamin'ny fananganana ny fikambanan'ny tanora ao Empoli sy Salernitana) izay nahavitany ny tanjona 30 tao amin'ny vanim-potoanan'ny 2007-08.
Nahatsikaritra ny tetikasan'ny tanora amin'ny baolina kitranin'ny Tafika izay nifindra tany Juventus tao 2008. Raha nilalao ho an'ny ekipan'ny tanora ao amin'ny U19, ny endrika tsotsotra tsy dia lehibe loatra dia nahita azy nandrava ny rakitsoratr'i Renzo Cappellaro tamin'ny taona 50 ary nanao ny laharam-panahin'ny Serie A fony izy 18.
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mitsangàna mba haka izany
Raha nahatsiaro ny lazany teo an-toerana ny maherifo an'ny Immobile tany amin'ny sehatry ny tanora, dia nijaly ihany koa izy mandra-pahamaizan'ny laza ny varavarany rehefa nahazo toky ho an'i Torino tao amin'ny 2013 izy.
Tao Torino dia tsy hita popoka ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo tamin'ny fanatsarana ny laharam-pahamehana ho an'ny ekipa ary nanangona tanjona 23 ho fanampiana ny Torino 7th amin'ny faran'ny vanim-potoan'ny 2013-2014 Serie A.
Ny tanjony dia manisa izay avo indrindra amin'ny vanim-potoana dia tsy vitan'ny hoe nahita ny fandresen'i Golden Boo be (Capocannoniere) saingy nisarika ny sain'ny mpitsikilo izay nitady ny hikarakarana ny serivisiny ho an'ny klioba Eoropeana. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -fifandraisana fiainana
Ao ambadiky ny mpilalao italiana mahomby iray dia sipa na sarimihetsika ary tsy mety ny Immobile. Ny mpifaninana miezinezina dia eo amin'ny fifandraisana maharitra Jessica Melena; a girlfriend and Model who became his wife.
Nihaona tamin'ny tambajotra sosialy izy mivady tamin'ny fotoana nilalaovan'ny "Idobile" an'i Pescara. Fotoana fohy talohan'ny nifankatiavan'izy ireo dia nifankatia i Jessica fa tsy maintsy nandao ny zavatra nataony taloha i Jessica, zava-misy naseho nandritra ny resadresaka iray izay nanamarihany fa:
Noho ny tsy fananan-tany dia niala aho, family and my roots. His love was like a tusunami that swept what used to be my former life and ushered me into new beginings.
Raha niresaka momba izay nahatonga azy ho lavo amin'ny fitiavana sy ny fisehoan-javatra izay nitarika ny mariaziny tamin'ny 17th of May 2015, dia nanamarika i Jessica fa nahatsapa ny toetrany manokana izy, anisan'izany ny faniriany tsy hiteraka hanambady azy.
Ny fanambadian'ny mpivady dia nahazo zanaka vavy anankiroa, saingy tsy misy ny mandà ny zava-misy hoe maniry ny hanan-janaka lahy ilay ramatoa romantika rehefa manambara ny vadiny:
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tattoos artistiques
Ny ankamaroan'ny mpilalao dia fantatra fa mitafy zavamananaina misy rantsana kripadika saingy ny tatoahin'ny Immobile dia iray izay mampiroborobo ny olona ankamamiana manaraka ny toeran'ny fanambadiana: manangana fianakaviana be fitiavana. Manao tebety etsy ambany izy 'Ny tsy fisian-tsika dia tsy vita ary tsy tia vola.' izay midika hoe 'Izay manomboka fiainana, ary ny fitiavana tsy mety tapitra.'
Alohan'ny hahazoana ilay tato-tebety ambony Imobbile dia nahazatra ny endriky ny zavakanto lahy voalohany indrindra i Michela zanany vavy eo amin'ny sandriny havanana.
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fanampiana amin'ny lalao video
Ny ankamaroan'ny mpilalao baolina matihanina dia manao fialamboly tsy hilalao lalao video fa vitsy dia vitsy ny fialam-boly ataon'izy ireo ho lasa fiankinan-doha toy ny tranobongo izay toa manana dipoavatra mafy noho ny milalao FIFA17.
Nisarika ny saina ho amin'ny fiankinan-dohan'ny tranokala tamin'ny volana 2016 ny vadiny Jessica Melina namoaka lahatsary tao amin'ny pejiny Instagram mba hanambaràna ny maro izay lazaina fa loza amin'ny fiankinan-doha FIFA17.
Ny horonan-tsary dia nisambotra an'i Jessica nanandrana nisarika ny sain'ny vadiny izay nanakona tanteraka azy. Azonao atao ny mandre azy manontany hoe "Darling izay ataonao?" Saingy tezitra be tao amin'ny lalao i Immobile mba hahatsapa fa teo izy teo !.
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Novonoina indray mandeha
Vetivety dia nokapohina tamin'ny July 2018 ny mpankafy iray mpankafy ny klioban'ny mpanohitra Pescara fony izy niala sasatra teny amoron-dranomasina niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanakavavy roa. Na dia izany aza, dia nirohotra tamin'ny fanampiana an'i Immobile ny polisy ary ny polisy mitam-piadiana dia nihodina hetsika tamin'ny fisamborana ilay lehilahy mitaingin-tsoavaly.
Ny fampandrosoana dia nanintona ny saina manoloana ireo mpankafy sy mpankafy manokana ireo mpilalao mpifankatia izay afaka mamela ny vokatry ny lalao baolina kitra, fiheveran'ny tomponà trano fisakafoanana akaikin'ny moron-dranomasina.
"Tsy fantatro ilay mpanafika. Ity ny karazana zava-nitranga izay mitranga rehefa omen'ny olona loatra ny tsy fivadihana amin'ny baolina kitra. "
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny fiainan'ny tena manokana
Tsy ampy ny mpilalao iray izay mety hijanona tsy misy dikany mba hanaporofoana ny tenany ho anisan'ny tsara indrindra. Miharihary izany ao amin'ny fiverenany mahatalanjona miaraka amin'ireo endri-bidy lehibe indrindra rehefa maro no mihevitra fa hihena ny asany.
Ankoatra izany, tsapany koa fa ilaina ny fifandraisana amin'ny fitiavana avy amin'ny fianakaviana sy ny hatsaran-tarehy avy amin'ny vadiny.
Raha ny fahalemeny, ny Immobile dia mety ho mafy loha, mialona ary tsy afa-mihetsika. Ambonin'ny zava-drehetra, izy dia kanto, tia am-pitiavana ary ara-panahy.
Ciro Immobile Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tsy ampy ny lobaka
Raha misy mpilalao baolina hafa mitondra ny laharana izay mampiseho ny anjara toerany eo amin'ny sehatra dia ny laharana 17 amin'ny lobaka Leonardo Bonucci dia mihoatra lavitra noho ny andraikitra sy andraikitra. Ny isa dia manondro ny daty nahaterahan'i Jessica Melena vadiny, izay teraka tamin'ny Jolay 17, 1990. Izany no antony mahatonga azy hiezaka hatrany hanao fampisehoana klioba amin'ny jerseys depictipang ny isa voatahiry.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Ciro tsy manan-tanindrazana sy ny zava-misy marina momba ny biographie. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.